2 nnukwu ụgbọ ala na ụlọ ọrụ ndị na Brazil ugbu a na-anabata Bitcoin
Abụọ Brazil ụgbọ ala na ụlọ ọrụ, Okporo ụzọ Garcia na South Brazil, na bụ akụkụ nke GSB otu dị nnọọ ghọrọ ndị mbụ njem iga ụlọ ọrụ Brazil na-anabata cryptocurrency ka a ugwo usoro.
The otu ibido họọrọ ka eji naanị Bitcoin, ma-ezube tinye Litecoin site July.
"Ọtụtụ akụ na ụba na azụmahịa arụmọrụ na-migrating na digital ụwa, na nke nke ụzọ njem iga ọ dị iche iche "na-ekwu GSB Group osote onyeisi oche Estefano Boiko Junior.
Ndị a njem ụlọ ọrụ na-enye njem n'etiti obodo ndị dị ka nke ọma dị ka onwe njem maka ụlọ akwụkwọ, klọb, ụlọ ọrụ na njem mmụta.
The ọhụrụ ugwo usoro dị site ụgbọ ala na ụlọ ọrụ ndị website, via online ndoputa naanị, na tiketi ga-eziga ndị ahịa si email ugwo nkwenye.
500 000 ndị mmadụ na Switzerland tozuru oke a Bitcoin dị ka ego usoro
A mkpọsa radically ịgbanwee Switzerland ego ụlọ ọrụ n'ime ihe yiri Bitcoin si aku usoro efu spectacularly ụnyaahụ - ya jisiri merie fọrọ nke nta 500,000 votes, gburugburu 25% nke ndị a gbara ajụjụ.
The controversial plan - mara dị ka Ọkaakaa Money Initiative - ga-hụrụ azụmahịa mmiri gbochiri electronically eke ego mgbe ha na-ibinye karịrị ha ego.
“Cryptocurrency na blockchain-adịghị anya dị ka ebe anyị na-aga. Ọ nwere ike na e ji n'okpuru usoro anyị na-proposing,” kwuru Emma Dawnay, osisi so of MoMo, otu nke chọrọ Ọkaakaa Money Initiative.
Digital Ego-aga isi na DasCoin
Kraken Daily Market Report maka 10.06.2018
$233M ahịa gafee ahịa niile taa
Cryptocurrencies nwere ike ịgbanwe otú anyị si arụ ọrụ
Lawmakers na U.S ...
Previous Post:Kwa atọ German weere cryptocurrencies dị ka onye na ego
Trevor Moede kwuru:
June 19, 2018 na 5:26 PM
September 4, 2018 na 2:10 AM
September 4, 2018 na 5:05 PM
September 5, 2018 na 1:46 AM